Yangu IPad Screen Inodziya! Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa. - Ipad
maitunes haazive iphone 6
kuratidzwa kwehupenyu nerudo
Yako iPad yakapererwa uye hauna chokwadi chekuita. Iwe uri kubata iyo kuratidza uye kudzvanya iyo Kumba bhatani, asi hapana chiri kuitika. Muchikamu chino, ndichakuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko kana yako iPad skrini yakagwamba !
Chinhu chekutanga kuita kana yako iPad skrini yakaomeswa nechando kuita kuigadzirisazve. Izvi zvinomanikidza yako iPad kudzima uye kudzoka pairi nekukasira, izvo zvinofanirwa kuzvimisikidza.
Kana yako iPad iine bhatani reKumba, panguva imwe chete pinda uye bata bhatani remagetsi uye bhatani reKusha kudzamara logo yeApple yaonekwa pakati pekuratidzwa kwePadad yako.
Kana yako iPad isina Bhatani repamba, pinda uye buritsa vhoriyamu kumusoro bhatani, wobva wadzvanya uye woburitsa vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya wobata Bhatani repamusoro kusvikira iyo skrini yasviba uye iyo logo yeApple yaonekwa.
Dzorera Up iPad yako
Usati waenda kumberi, ita shuwa kuti watsigira yako iPad. Nenzira iyoyo, haungarasikirwe nechero data rako, kungangoitika kana tiri kusangana nedambudziko rakaomarara re software.
Kuti uchengetedze iPad yako kuICloud, enda kuZvirongwa uye tora pazita rako kumusoro kwechiso. Wobva wadzvanya iCloud -> iCloud Backup -> Back Up Izvozvi .
Vhiki makumi matatu nemasere ane nhumbu kufamba kwakawanda uye kumanikidza
Unogona zvakare kuchengetedza yako iPad muTunes, kana iwe uine PC kana Mac inomhanya macOS 10.14 kana kupfuura. Unganidza yako iPad kune komputa uye vhura iTunes. Wobva wadzvanya iyo bhatani rePadad padyo nekona yekumusoro-kuruboshwe kona yekona uye tinya Dzokera Kumusoro Izvozvi .
Kutsigira yako iPad kune Tsvaga, tevera nhanho idzi:
Iwe unenge uchisimudza yako iPad uchishandisa yekuwana kana iwe uine yako Mac inomhanya macOS Catalina 10.15 kana nyowani. Unganidza yako iPad kune Mac yako uchishandisa tambo yekuchaja uye vhura Finder. Dzvanya pane yako iPad pasi Nzvimbo , wobva wadzvanya denderedzwa padyo ne Dzorera rese data pane yako iPad kune iyi Mac .
Isu tinokurudzira kunyorera iko kuchengetedza zvakare nekutarisa pabhokisi riri padhuze ne Encrypt Yemunharaunda Backup . Pakupedzisira, tinya Dzokera Kumusoro Izvozvi .
Icho chiri App Inokonzeresa Yako iPad Kuti Ifrize?
Yakawanda yenguva, yakaipa app inogona kuve chikonzero nei yako iPad skrini inotonhora. Iyo app inogona kupunzika kana iwe ukaivhura kana kuishandisa, kutonhora yako iPad.
foni yangu inoti kuchaja kwayo asi haisi
Imwe nzira yekukurumidza yekuona kana iwe uine nyaya neicho chakanangana neapp ndeyekuenda kuPad ​​Analytics. Vhura Zvirongwa uye tapira Zvekuvanzika -> Analytics & Kuvandudza -> Analytics Dhata .
Kana iwe ukaona zita reimwe rako reapplication rakanyorwa pano kakawanda mumutsara, panogona kunge paine nyaya neiyo app. Ini ndinokurudzira kusunungura iyo app uye kuisazve iyo zvakare.
Kuti uite izvi, tinya uye ubatisise icon yeapp yaunoda kudzima. Tinya Delete App apo menyu inovhura. Pakupedzisira, tapira Delete kuti uninstall Anwendung musi iPad wako.
Kana iyo purogiramu ikaramba ichiomesa firiji rePadad yako, zvingangodaro zviri nani kungodzima purogiramu yacho zvachose uye uwane imwe nzira.
Dzorerazve Zvese zvePad iPad yako Zvirongwa
Isu tinowanzo taura kuReset All Zvirongwa se 'magic bullet' yezvinonetsa software maseru. Matambudziko eSoftware anonetsa kwazvo kuteedzera pasi, asi isu tinogona kazhinji kugadzirisa dambudziko nekumisikidza zvese zviri muZvirongwa app.
Zvese zviri muZvirongwa zveApp zvinodzoserwa kune zvakasarudzika zvefekitori paunogadzirisa Zvese Zvirongwa. Izvi zvinoreva kuti uchafanirwa kuisazve mapassword eWi-Fi, wozobatanidza zvishandiso zveBluetooth, uye kugadzirisa zvakare zvigadziriso zvinokubatsira kunatsiridza iPad bhatiri hupenyu .
Kugadzirisa zvese zvigadziriro pane yako iPad, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta -> Seta Zvese Zvirongwa . Pinda yako iPad passcode uye tap Dzorerazve Zvese Zvirongwa kusimbisa.
Iyo DFU kudzoreredza ndiyo yakadzika mhando iPad kudzorera. Iyo inodzima uye kuisazve iyo yese kodhi pane yako iPad, ichichipa iyo yakakwana nyowani kutanga. Ita shuwa kuti iwe une backup ye iPad yako usati waisa muDFU modhi. Paunenge iwe wagadzirira, tarisa yedu iPad DFU maitiro ekufamba !
iPad Kugadzirisa Sarudzo
Kana yako iPad ichiramba ichitonhora, kana kana iTunes isiri kuziva yako iPad zvachose, iwe uchafanirwa kuitora kuti igadziriswe. Kukanganiswa kwemvura kana zvakaputsika zvemukati zvinokonzeresa chimwe cheaya matambudziko! Seta musangano kubhawa rako reGenius reApple kana iPad yako ichichengetedzwa neAppleCare + chirongwa.
iphone 6s screen yakaenda nhema uye wont batidza
Chiri Kutanga Kudziya!
Iwe wagadzirisa yako chando iPad! Iwe unenge uchinyatsoziva maitiro ekugadzirisa dambudziko rinotevera nguva yako iPad skrini kutonhora. Siya chero mimwe mibvunzo kana uine nezve yako iPad muchikamu chemashoko pazasi!